စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာဆိုတာဘာလဲ။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မေလ 28, 2019 အင်္ဂါနေ့, မေလ 28, 2019 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောလများအတွင်း Salesforce ဖောက်သည်များအားသူတို့၏လိုင်စင်ရပလက်ဖောင်းများကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးအသုံးချရမည်နည်းဗျူဟာကိုတီထွင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် ExactTarget ၏အစောပိုင်း ၀ န်ထမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီး Salesforce နှင့်သူတို့၏ရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အားလုံးတို့၏အဆုံးမဲ့စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။
၄ င်းသည်ဖောက်သည်များအတွက် Salesforce ပလက်ဖောင်းများစုဆောင်းခြင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့အတွက်ထူးခြားသောဂုဏ်သတင်းရှိသော Salesforce မိတ်ဖက်မှတစ်ဆင့်ထိုအခွင့်အရေးကိုရရှိခဲ့သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်သူတို့သည်ဥယျာဉ်ထဲမှထွက်ခွာသွားကြပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့လိုအပ်သည်မှာဖြည့်ရန်လိုအပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းကွာဟချက်ကိုသတိပြုမိလာသည်။ ဗျူဟာ.
Salesforce သည်မရေမတွက်နိုင်သောအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများကိုပလက်ဖောင်းကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးအသုံးချသည်ဟူသောအလားအလာကိုဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်၏ Salesforce Partner သည်မည်သည့်မဟာဗျူဟာကိုမဆိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ အဆိုပါကွာဟမှု, သို့သော်, ကုမ္ပဏီများသည်အမှန်တကယ်မဟာဗျူဟာဖြစ်နိုင်သည်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲ Salesforce နှင့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသို့ဝင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Salesforce ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်မဖြစ်သည် စျေးကွက်ဗျူဟာ။ Salesforce ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း - သင်ရောင်းချပုံ၊ သင်မည်သူရောင်းချသည်၊ သင်နှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်သည်၊ သင်၏အခြားကော်ပိုရေးရှင်းပလက်ဖောင်းများနှင့်မည်သို့ပေါင်းစည်းသည်သာမကအောင်မြင်မှုတိုင်းတာပုံတို့ကိုပါဆိုလိုသည်။ Salesforce သို့လိုင်စင်ရယူခြင်းနှင့် logins များပေးပို့ခြင်းသည်မဟာဗျူဟာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် playbook အလွတ်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ရည်ရွယ်သောလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်။
A စျေးကွက်ဗျူဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလူအများထံရောက်ရှိရန်နှင့်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖောက်သည်များအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်တစ်ဦးကိုဝယ်ယူခဲ့လျှင် စျေးကွက်ဗျူဟာ အတိုင်ပင်ခံတစ်ယောက်ဆီကနေခင်ဗျားသူတို့ကိုဘာတွေလွှတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မလဲ။ ငါသည်ဤမေးခွန်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်လုံးမှခေါင်းဆောင်များအားမေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအဖြေများသည်စိတ်ကူးမှသည်အဆုံးသတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းအထိသင်အံ့အားသင့်သွားလိမ့်မည်။
နည်းဗျူဟာသည်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုတီထွင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူခြင်းဆိုပါက၎င်းသည်ထိုမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်လည်းမဟုတ်ပါ။
တစ် ဦး ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာဥပမာ: Fintech
Salesforce နဲ့အတူလာမယ့်စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ webinar တစ်ခုရပြီ။ ဘဏ္Serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများရှိဖောက်သည်အတွေ့အကြုံခရီးစဉ်များဖန်တီးရာတွင်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များဘဏ္Financialာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခရီးသွားမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆွေးနွေးပါ။ ငါဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအကြားဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဒစ်ဂျစ်တယ်သွေးခွဲအပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အခြေခံ - သုတေသနအချို့လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးနောက် webinar ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များကားအဘယ်သူနည်း - သူတို့၏ဘဏ္literာရေးဆိုင်ရာတတ်မြောက်မှု၊ သူတို့၏ဘဝအဆင့်အထိ၊ ၎င်းတို့၏ငွေကြေးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထိ။
သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုရှိရာ - သူတို့အဖွဲ့အစည်းသည်သူတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရာတွင်မည်မျှရင့်ကျက်သည်။ ၎င်းတို့သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုပညာပေးသည်ဖြစ်စေမသည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့ဖောက်သည်များထံမှ၎င်းတို့ထံမှသင်ယူခြင်းမှအမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆက်သွယ်မှုရှိမရှိသူတို့သိခဲ့သလား။
ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သလဲ - အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်တုံ့ပြန်ချက်တောင်းခံခဲ့ပါက၊ အထက်ဖော်ပြပါမေးခွန်းများကိုသူတို့အကဲဖြတ်နိုင်မည်လား၊ ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုပညာပေးရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်အရင်းအမြစ်များရှိပါသလား။
အဖွဲ့အစည်းတွင်အရင်းအမြစ်များရှိပါသလား - ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အွန်လိုင်းတွင်အမြဲတမ်းသုတေသနပြုနေသည့်အကြောင်းအရာတစ်ဒါဇင်ကိုပြသခဲ့သည် - အကြွေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများ၊ အငြိမ်းစားစီမံကိန်းအစီအစဉ်အထိ။ ဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့၏ဘဏ္ancesာရေးများကိုအကဲဖြတ်ရန်၊ စီစဉ်ရန်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီရန် DIY ကိရိယာများကိုရှာဖွေနေသည်။ သူတို့နှင့်အတူလုပ်ကိုင်နေသောအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအားကြီးသောမိတ်ဖက်တစ် ဦး အားညွှန်ပြရန်) လိုအပ်သည်။
ဝယ်ယူသည့်အဆင့်တစ်ခုစီတွင်အဖွဲ့အစည်းကိုမြင်နိုင်ပါသလား - ပြproblemနာဖော်ထုတ်ခြင်းမှဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်ဘဏ္financialာရေးအဖွဲ့အစည်းရွေးချယ်ခြင်းအထိအဖွဲ့အစည်းသည် ၀ ယ်သူ၏ခရီးစဉ်အတွင်းအဆင့်တိုင်းသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသလား။ ၀ ယ်သူ၏တွေ့ရှိချက်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းအထောက်အကူပြုရန်နှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုအိမ်မှမောင်းထုတ်ရန်၎င်းတို့တွင်ပစ္စည်းနှင့်အရင်းအမြစ်များရှိသလား။
အဖွဲ့အစည်းကို ဦး စားပေးနည်းလမ်းများမှတဆင့်ရောက်ရှိနိုင်မည်လား - ဆောင်းပါးသည်တစ်ခုတည်းသောကြားခံမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့တချို့လူတွေကစာမဖတ်တတ်တော့ဘူး။ အဖွဲ့အစည်းသည်စာသား၊ ရုပ်ပုံများ၊ အသံနှင့်ဗီဒီယိုများကိုသူတို့၏အလားအလာများ (သို့) ဖောက်သည်များထံရောက်ရှိရန်အသုံးပြုပါသလား ပိုကြိုက်?
အကောင်အထည်ဖော်ပြီးတာနဲ့ ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုတိုင်းတာကြလိမ့်မည် သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာနှင့်အတူ? သင်မဟာဗျူဟာတစ်ခုကိုမအကောင်အထည်ဖော်မီတိုင်းတာမှုစွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲဆိုတာမဆုံးဖြတ်ခင်ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဘယ်အချိန်မှာပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ။ သူတို့အလုပ်မလုပ်ရင်သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာခေါက်မှာလဲ။
ဤမေးခွန်းများအားလုံးကိုသင်ဖြေဆိုနိုင်လျှင်ခိုင်လုံသောအကြောင်းရှိလိမ့်မည် စျေးကွက်ဗျူဟာ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာသည်သင့်အားကိရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုလိုအပ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်စီစဉ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော fintech ဥပမာမှသင်၏ကုမ္ပဏီတွင်အိမ်အပေါင်ပစ္စည်းဂဏန်းတွက်စက်မရှိကြောင်းသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာနည်းဗျူဟာသည် calculator ၏ပုံသဏ္,ာန်၊ သင်မည်သို့တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်မည်၊ ၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်လက်ခံမည်၊ သို့မဟုတ်သင်မည်သို့မြှင့်တင်မည်ကိုဆိုလိုသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးလုပ်ဆောင်မှုအဆင့်များဖြစ်သည်။ လမ်းမ။ နည်းဗျူဟာသည်သင်ဖောက်သည်များထံရောက်ရှိရန်လိုအပ်သောဂဏန်းတွက်စက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်သေဒဏ်စီရင်နောက်ပိုင်းမှာလာပါတယ်။
ငါ Salesforce နှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းများပိုမိုများပြားစွာနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသောအခါ၊ ထိုအရာကိုပန်းခြံ မှနေ၍ ထွက်ခွာခိုင်းသည်။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများတွင်သူတို့ကိုကူညီရန်နည်းပညာဆိုင်ရာအဖြေတစ်ခုလိုအပ်ကြောင်း Salesforce မှ ၀ ယ်ယူသူအားကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်၎င်းတို့အကောင်အထည်ဖော်ရန်မျှော်လင့်သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မဟာဗျူဟာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကွာဟချက်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးပလက်ဖောင်းများ၊ မိတ်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များအကြားလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကြားမှာရှိနေပါတယ် စီမံကိန်း သူတို့ရဲ့အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များရောက်ရှိရန်။ ငါတို့ရှိသမျှအကြားသဘောတူညီမှုရှိတဲ့အခါ, Salesforce မိတ်ဖက်ဝင်နှင့်ဖြေရှင်းချက်အကောင်အထည်ဖော်, ထို့နောက် client ကိုမဟာဗျူဟာကို execute ။